ပင်မစာမျက်နှာ » သေဘာတူညီခ်က္မ်ား
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်: Aprilပြီလ 03, 2015
ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ (“ စည်းကမ်းချက်များ”၊ “ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ”) သည် Eostis SARL (“ ကျွန်ုပ်တို့”၊ “ ကျွန်ုပ်တို့”၊ သို့မဟုတ်) မှလုပ်ကိုင်သော https://www.wpsolr.com/ ဝက်ဘ်ဆိုက် (“ ဝန်ဆောင်မှု”) နှင့်သင်၏ဆက်ဆံရေးကိုထိန်းချုပ်သည်။ “ ငါတို့”) ။
အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြု. ရှေ့မှာဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များဂရုတစိုက်ဖတ်ပါ။
သင့်ရဲ့ရန်လက်လှမ်းနှင့် of Service ကိုအသုံးပြုမှုသည်သင်၏၏လက်ခံမှုနှင့်ဤသတ်မှတ်ချက်များကိုအတူလိုက်နာမှုအပေါ်အေးစက်နေသည်။ ဤသတ်မှတ်ချက်များဝန်ဆောင်မှုရယူသို့မဟုတ်အသုံးပြုနိုင်သည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ဧည့်သည်များအသုံးပြုသူများနှင့်အခြားသူများသက်ဆိုင်ပါသည်။
အကယ်၍ ၀ န်ဆောင်မှု (“ ၀ ယ်ခြင်း”) မှတစ်ဆင့်ရရှိနိုင်သောထုတ်ကုန် (သို့) ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုခုကိုသင် ၀ ယ်လိုပါကသင်၏ ၀ ယ်ယူမှုနှင့်သက်ဆိုင်သောသတင်းအချက်အလက်အချို့ကိုသင်၏အကြွေးဝယ်ကဒ်နံပါတ်၊ သင်၏ခရက်ဒစ်ကဒ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးခြင်းတို့အပါအဝင်၊ သင်၏ငွေတောင်းခံလွှာလိပ်စာနှင့်သင်၏ပို့ဆောင်ရေးသတင်းအချက်အလက်။
ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုကိုရရှိနိုင်မှု, ထုတ်ကုန်သို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှု၏ဖော်ပြချက်သို့မဟုတ်စျေးနှုန်းအမှားအယွင်းများ, သင့်အမိန့်များသို့မဟုတ်အခြားအကြောင်းရင်းများထဲမှာအမှား: ကျနော်တို့အပါအဝင်အချို့သောအကြောင်းပြချက်များအတွက်မည်သည့်အချိန်တွင်မသင့်ရဲ့အမိန့်ငြင်းဆန်သို့မဟုတ်ဖျက်သိမ်းရန်ညာဘက်ပေမယ့်ကန့်သတ်မရရှိသည်။
လိမ်လည်မှုသို့မဟုတ်တရားမ ၀ င်သောသို့မဟုတ်တရားမ ၀ င်ငွေပေးငွေယူမှုများကိုသံသယရှိပါကသင်၏အမိန့်ကိုငြင်းဆန်ရန်သို့မဟုတ်ဖျက်သိမ်းပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
ကျနော်တို့အဆက်မပြတ်ဝန်ဆောင်မှုအပေါ်ထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟာယပူဇော်သက္ကာကို update နေကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုအပေါ်ရရှိနိုင်သောကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှု, mispriced တိဖော်ပြထား, ဒါမှမဟုတ်ကိုမရရှိနိုင်, ငါတို့သည်ဝန်ဆောင်မှုအပေါ်သတင်းအချက်အလက်ကို update အတွက်နှင့်အခြားဝဘ်က်ဘ်ဆိုက်များပေါ်မှာငါတို့ကြော်ငြာအတွက်နှောင့်နှေးတွေ့ကြုံခံစားစေခြင်းငှါနိုင်ပါသည်။
ကျနော်တို့နှင့်စျေးနှုန်းများ, ထုတ်ကုန်ပုံများ, သတ်မှတ်ချက်များ, ရရှိနိုင်မှု, နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများအပါအဝင်မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်များ၏တိကျမှန်ကန်မှုကိုသို့မဟုတ်ပြည့်စုံ, အာမမခံနိုင်ပါဘူးလို့မရပါဘူး။ ကျနော်တို့ကိုပြောင်းလဲရန်သို့မဟုတ်အပ်ဒိတ်လုပ်သတင်းအချက်အလက်နှင့်ကြိုတင်သတိပေးခြင်းမရှိပဲသည့်အချိန်တွင်မဆိုအမှားများကို, တိ, ဒါမှမဟုတ်ပျက်ကွက်ပြင်ဆင်ရန်ခွင့်ရှိသည်။
၀ န်ဆောင်မှု၏အချို့သောအစိတ်အပိုင်းများကိုစာရင်းသွင်းခြင်း (“ Subscription (s)”) ဖြင့်ငွေတောင်းခံလွှာတင်ရသည်။ သင့်အနေဖြင့်အကြိမ်ကြိမ် (ပုံမှန်ငွေတောင်းခံလွှာ) (ပုံမှန်ငွေတောင်းခံလွှာ) ကိုကြိုတင်စာရင်းပေးမည်။ စာရင်းပေးသွင်းခြင်း ၀ ယ်သည့်အခါသင်ရွေးချယ်သော subscription အမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ ငွေတောင်းခံလွှာကိုလစဉ်သို့မဟုတ်နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သည်။
ငွေတောင်းခံသံသရာတစ်ခုစီ၏အဆုံး၌သင်ဖျက်သိမ်းခြင်းသို့မဟုတ် Eostis SARL ကဖျက်သိမ်းခြင်းမရှိပါကသင်၏ Subscription သည်အခြေအနေများအတိုင်းအလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုးလိမ့်မည်။ သင်၏အွန်လိုင်းအကောင့်စီမံမှုစာမျက်နှာမှတဆင့်ဖြစ်စေ Eostis SARL ဖောက်သည်အထောက်အကူပြုအဖွဲ့နှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့်သင်၏ Subscription သက်တမ်းတိုးခြင်းကိုပယ်ဖျက်နိုင်သည်။
သင်၏ Subscription အတွက်ငွေပေးချေမှုကိုခရက်ဒစ်ကဒ် (သို့) PayPal အပါအ ၀ င်တရားဝင်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းလိုအပ်သည်။ Eostis SARL အားနာမည်အပြည့်အစုံ၊ လိပ်စာ၊ ပြည်နယ်၊ စာပို့သင်္ကေတ၊ တယ်လီဖုန်းနံပါတ်နှင့်တရားဝင်ငွေပေးချေသည့်နည်းလမ်းသတင်းအချက်အလက်တို့အပါအဝင်တိကျပြီးပြည့်စုံသောငွေတောင်းခံသတင်းအချက်အလက်များကိုသင်ပေးရမည်။ ထိုကဲ့သို့သောငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုတင်ပြခြင်းဖြင့်သင်သည် Eostis SARL အားသင်၏အကောင့်မှဖြတ်တောက်သော ၀ န်ဆောင်ခအားလုံးကိုဤငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာကိရိယာများသို့အလိုအလျောက်ခွင့်ပြုသည်။
မည်သည့်အကြောင်းပြချက်ကြောင့်မဆိုအလိုအလျောက်ငွေတောင်းခံရန်ပျက်ကွက်ပါက Eostis SARL သည်ငွေတောင်းခံသည့်ကာလနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ငွေတောင်းခံလွှာပေါ်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းငွေပေးချေမှုကာလနှင့်သက်ဆိုင်သည့်သတ်မှတ်ရက်အတွင်းသင်ကိုယ်တိုင်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရမည်ဟုညွှန်ပြသည့်အီလက်ထရောနစ်ငွေတောင်းခံလွှာကိုထုတ်ပေးလိမ့်မည်။
Eostis SARL သည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်နှင့်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုစာရင်းပေးသွင်းခြင်းအတွက်စာရင်းပေးသွင်းခကိုပြုပြင်နိုင်သည်။ မည်သည့် Subscription အခကြေးငွေကိုမဆိုပြောင်းလဲလိုက်ပါကလက်ရှိငွေတောင်းခံသံသရာ၏အဆုံးမှာထိရောက်လာပါလိမ့်မည်။
Eostis SARL သည်ဤပြောင်းလဲမှုကိုမထိရောက်ခင်သင်၏ Subscription ကိုရပ်ဆိုင်းရန်အခွင့်အလမ်းပေးမည်ဟု ၀ န်ဆောင်ခအတွက်မည်သည့်ပြောင်းလဲမှုကိုမဆိုအကြောင်းကြားရန်သင့်အားကြိုတင်အသိပေးလိမ့်မည်။
အဆိုပါ Subscription ကြေးပြောင်းလဲမှုပြီးနောက် of Service ကိုသင့်ရဲ့ဆက်လက်အသုံးပြုမှုကိုအကျိုးသက်ရောက်သို့ကြွလာပြုပြင်ထားသော Subscription ကြေးပမာဏကိုပေးချေရန်သင့်သဘောတူညီချက်ရှိပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုသည်သတင်းအချက်အလက်၊ စာသား၊ ဂရပ်ဖစ်၊ ဗွီဒီယိုများသို့မဟုတ်အခြားပစ္စည်းများ (“ အကြောင်းအရာ”) ကိုတင်ရန်၊ ချိတ်ရန်၊ သိုလှောင်ရန်၊ သင် ၀ န်ဆောင်မှုတွင်တင်ထားသည့်အကြောင်းအရာ၊ ၎င်း၏တရားဝင်မှု၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်သင့်လျော်မှုတို့အတွက်သင့်တွင်တာ ၀ န်ရှိသည်။
၀ န်ဆောင်မှုသို့အကြောင်းအရာတင်ခြင်းအားဖြင့်သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အား ၀ န်ဆောင်မှုတွင်၎င်းမှတစ်ဆင့်အသုံးပြုရန်၊ ပြုပြင်ရန်၊ လူသိရှင်ကြားလုပ်ဆောင်ရန်၊ လူသိရှင်ကြားပြသရန်၊ ပြန်လည်ထုတ်ဝေရန်နှင့်ဖြန့်ဝေရန်အခွင့်အရေးနှင့်လိုင်စင်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားခွင့်ပြုသည်။ သင်သည်သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုတွင်တင်ထားသော၊ တင်ခြင်း၊ ဖော်ပြခြင်းနှင့်ပြသသည့်မည်သည့်အကြောင်းအရာကိုမဆိုသင်၏အခွင့်အရေးအားလုံးကိုသိမ်းဆည်းထားပြီးထိုအခွင့်အရေးများကိုကာကွယ်ရန်သင်၌တာဝန်ရှိသည်။ ဤလိုင်စင်တွင်သင်၏ပါဝင်မှုကိုဤသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီသင်သုံးနိုင်သောအခြားအသုံးပြုသူများအားသင်၏အကြောင်းအရာများကိုရရှိနိုင်စေရန်သင်ပါဝင်သည်ကိုသင်သဘောတူသည်။
သင်က (၁) အကြောင်းအရာသည်သင်၏ပိုင်ဆိုင်မှု (သင်ပိုင်ဆိုင်သည်) သို့မဟုတ်သင်အသုံးပြုရန်နှင့်ဤသတ်မှတ်ချက်များတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းအခွင့်အရေးနှင့်လိုင်စင်ထုတ်ပေးပိုင်ခွင့်ရှိသည်၊ (၂) သင်၏ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများတွင်သို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအခွင့်အရေးများ၊ လူသိရှင်ကြားအခွင့်အရေးများ၊ မူပိုင်ခွင့်များ၊ ကန်ထရိုက်အခွင့်အရေးများသို့မဟုတ်အခြားလူတစ် ဦး တစ်ယောက်၏အခြားအခွင့်အရေးများကိုမချိုးဖောက်ပါ။
သငျသညျအကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူအကောင့်တစ်ခုဖန်တီးသည့်အခါသငျသညျကိုတိကျမှန်ကန်ပြီးပြည့်စုံသော, လူအပေါင်းတို့အချိန်များတွင်လက်ရှိကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ပေးရမညျ။ အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ပျက်ကွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေါ်တွင်သင်၏အကောင့်ချက်ချင်းရပ်စဲဖြစ်ပေါ်စေမည်ဖြစ်သောအဆိုပါသတ်မှတ်ချက်များပြိုပျက်ရာရှိပါသည်။
သင်သည်သင်၏ password ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုသို့မဟုတ် Third-party ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူရှိ, မရှိ, သင် Service ကိုဝင်ရောက်ဖို့အသုံးပြုစကားဝှက်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဘို့နှင့်သင်၏ password ကိုအောက်မှာဆိုလှုပ်ရှားမှုများသို့မဟုတ်လုပ်ရပ်များအတွက်တာဝန်ရှိဖြစ်ကြသည်။
သင်တို့ကိုတစ်ဦးအသုံးပြုသူအမည်အဖြစ်အခြားသူတစ်ဦးသို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းသို့မဟုတ်အသုံးပြုမှုအတွက်တရားမရရှိနိုင်, သင့်လျော်သောခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲသငျသညျထက်အခြားအခြားသူတစ်ဦးသို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းမဆိုအခွင့်အရေးဘာသာရပ်သောအမည်သို့မဟုတ်ကုန်သွယ်မှုအမှတ်အသား, ဒါမှမဟုတ်နာမည်တစ်ခု၏အမည်ကိုအသုံးမပြုစေခြင်းငှါ မဟုတ်ရင်, ထိုးစစ်အောက်တန်းသို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းသောဖြစ်ပါတယ်။
၀ န်ဆောင်မှုနှင့်၎င်း၏မူရင်းအကြောင်းအရာ (အသုံးပြုသူများမှပေးသောအကြောင်းအရာများမှအပ) အင်္ဂါရပ်များနှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်မှုသည် Eostis SARL နှင့်၎င်း၏လိုင်စင်ရသူများ၏သီးသန့်ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်မည်။ ၀ န်ဆောင်မှုကိုမူပိုင်ခွင့်၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ပြင်သစ်နှင့်နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များ၏ဥပဒေများဖြင့်ကာကွယ်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်ကုန်သွယ်ရေး ၀ တ်စုံများသည် Eostis SARL ၏ကြိုတင်ရေးသားထားသောခွင့်ပြုချက်မရပဲမည်သည့်ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုမျိုးတွင်မဆိုအသုံးမပြုပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုသည် Eostis SARL မှပိုင်ဆိုင်သို့မဟုတ်မထိန်းချုပ်သောတတိယပါတီဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများသို့လင့်များပါ ၀ င်နိုင်သည်။
Eostis SARL သည်မည်သည့်တတိယပါတီဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများ၏အကြောင်းအရာ၊ သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒများသို့မဟုတ်အလေ့အကျင့်များကိုထိန်းချုပ်ခြင်းမရှိ၊ တာ ၀ န်ယူခြင်းလည်းမရှိပါ။ Eostis SARL သည်ကုန်ပစ္စည်းများ၊ ကုန်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုခြင်း (သို့) မှီခိုခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသည့်သို့မဟုတ်ပျက်စီးစေသည့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက် Eostis SARL သည်တိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်သွယ်ဝိုက်။ တာ ၀ န်ယူမှုရှိမည်မဟုတ်ဟုသင်ထပ်မံအသိအမှတ်ပြုသည်။ မည်သည့်ထိုကဲ့သို့သောက်ဘ်ဆိုက်များသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများမှတဆင့်။
ကျနော်တို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်စည်းကမ်းချက်များနှင့်အခွအေနမြေားနှငျ့သငျသွားရောက်ကြည့်ရှုကြောင်းမည်သည့် Third-party ကို web site များသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများ၏ကိုယ်ရေးမူဝါဒများဖတ်ပါရန်သင့်အားအကြံပြုသည်။
ရပ်စဲအပေါ်သို့ယင်းဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုရန်သင့်လက်ျာဘက်ချက်ချင်းငြိမ်းလိမ့်မည်။ သင်သည်သင်၏ account ကိုရပ်ဆိုင်းရန်ဆန္ဒရှိလျှင်, သင်ရိုးရှင်းစွာဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြု. ကိုရပ်ဆိုင်းကြောင်းလိမ့်မည်။
Eostis SARL နှင့်၎င်း၏ဒါရိုက်တာများ၊ ၀ န်ထမ်းများ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၊ အေးဂျင့်များ၊ ပေးသွင်းသူများသို့မဟုတ်တွဲဖက်မှုများသည်မည်သည့်သွယ်ဝိုက်။ မဆို၊ (သို့မဟုတ်) ၀ န်ဆောင်မှုကိုလက်လှမ်းမီခြင်းသို့မဟုတ်အသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်အသုံးမပြုနိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောသို့မဟုတ်အခြားသိမ်မွေ့သောဆုံးရှုံးမှုများ၊ (၂) ၀ န်ဆောင်မှုတွင်မည်သည့်တတိယပါတီ၏မဆိုအမူအကျင့်၊ (၃) ၀ န်ဆောင်မှုမှရရှိသောအကြောင်းအရာ၊ နှင့် ()) သင်၏ထုတ်လွှင့်မှုသို့မဟုတ်အကြောင်းအရာများကိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်ပြောင်းလဲခြင်း၊ အာမခံခြင်း၊ ကန်ထရိုက်ခြင်း၊ တရားမ ၀ င်မှုအပါအ ၀ င်အခြားတရား ၀ င်သီအိုရီများအရဖြစ်စေ၊ ထိုကဲ့သို့သောပျက်စီးမှုဖြစ်နိုင်ခြေကိုကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးသည်ဖြစ်စေ၊ ဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားသောဆေးတစ်လက်သည်၎င်း၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရည်ရွယ်ချက်ကိုပျက်ကွက်သည်ဟုတွေ့ရှိပါက။
သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်သင်၏တစ် ဦး တည်းသောအန္တရာယ်ဖြစ်သည်။ ၀ န်ဆောင်မှုကို“ AS IS” နှင့်“ AS DISAILABLE” အခြေခံပေါ်တွင်ထောက်ပံ့ပေးထားသည်။ ဤ ၀ န်ဆောင်မှုသည်မည်သည့်အာမခံချက်မဆို၊ တိကျသောသို့မဟုတ်အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်သော၊ ကုန်သွယ်မှုအာမခံချက်၊ သီးခြားရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သင့်လျော်မှု၊
Eostis SARL သည်၎င်း၏လက်အောက်ခံများ၊ တွဲဖက်များနှင့်လိုင်စင်ရသူများက (က) ၀ န်ဆောင်မှုသည်အချိန်မရွေး၊ နေရာမရွေးအချိန်မရွေး၊ (ခ) အမှားအယွင်းများ၊ (ဂ) ၀ န်ဆောင်မှုတွင်ဗိုင်းရပ်စ်များသို့မဟုတ်အခြားအန္တရာယ်ရှိသောအစိတ်အပိုင်းများမရှိခြင်း၊ (d) ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်း၏ရလဒ်သည်သင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီလိမ့်မည်။
ဤသတ်မှတ်ချက်များမဆိုညာဘကျသို့မဟုတ်ပြဋ္ဌာန်းချက်ပြဋ္ဌာန်းရန်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပျက်ကွက်သူတွေကိုအခွင့်အရေးကိုတစ်ဦးစွန့်လွှတ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။ ဤသတ်မှတ်ချက်များမဆိုပြဋ္ဌာန်းချက်တရားရုံးအားဖြင့်မမှန်ကန်ပါသို့မဟုတ်မပြုနိုင်ဖြစ်ကျင်းပလျှင်ဤသတ်မှတ်ချက်များကျန်ရှိနေသေးသောပြဋ္ဌာန်းချက်အကျိုးသက်ရောက်မှု၌တည်နေပါလိမ့်မယ်။ ဤသတ်မှတ်ချက်များကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်. ငါတို့စပ်ကြားတစ်ခုလုံးကိုသဘောတူညီချက်တစ်ရပ်ကိုဖွဲ့စည်း, ငါတို့သည်ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်. ငါတို့စပ်ကြားရှိစေခြင်းငှါမဆိုကြိုတင်သဘောတူညီချက်များကိုပယ်ဖျက်အစားထိုးခြင်းနှင့်အစားထိုးလိုက်ပါ။
ကျနော်တို့သည့်အချိန်တွင်မဆိုဤသတ်မှတ်ချက်များကိုပြုပြင်မွမ်းမံသို့မဟုတ်အစားထိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်ခုတည်းသောဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်, ခွင့်ရှိသည်။ တစ်ဦးတည်းဖြတ်မူပစ္စည်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျနော်တို့ကအနည်းဆုံး 30 ရက်ပေါင်းပေးဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်ကြိုတင်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုယူပြီးအသစ်ဝေါဟာရများမှသတိထားမိ။ ဘာပစ္စည်းပြောင်းလဲမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်ခုတည်းသောဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်ဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မည်ရှိပါသည်။
သူတို့အားတည်းဖြတ်မူများကိုထိရောက်သောဖြစ်လာပြီးနောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုရယူသို့မဟုတ်သုံးစွဲဖို့ဆက်လက်ဖြင့်, သင်သည်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောအသုံးအနှုန်းများအားဖြင့်ချည်နှောင်လျက်ခံရဖို့သဘောတူသည်။ သငျသညျသစ်ကိုဝေါဟာရများမှသဘောမတူဘူးလျှင်, ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြု. ကိုရပ်တန့်ပေးပါ။